सुरक्षा गार्ड कुटिएको भाइरल भिडियोबारे छानविन गर्दै दूतावास – Naya Kura Daily
July 31, 2020 1159
काठमाडौँ । मलेसियामा एक सुरक्षा गार्ड कुटिएको भिडियोबारे मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले छानबिन गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोमा कुटिने सुरक्षा गार्ड नेपाली भएको दावी गरिएको छ । तर, उनी नेपाली नै हुन् वा अन्य कुनै देशका नागरिक हुन् भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।
नेपाली दावी गर्दै सामाजिक संजालमा भिडियो भाइरल भएपछि क्वलालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । भिडियोेमा एक व्यक्तिले निर्घात रुपमा युनिफर्ममा रहेका (सम्भवतः ड्युटीमा रहेका) एक सुरक्षा गार्डलाई कुटेको देख्न सकिन्छ । अहिले त्यो भिडियोलाई विशेषतः विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालमा मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई कुटिएको भनेर शेयर गरेका छन् ।
भिडियोमा मलेसियन भाषा बोल्ने एक व्यक्तिले सुरक्षा गार्डलाई ‘तैँले आफूलाई के भन्ने ठान्छस्, तँ यहाँ काम गर्न आको हो कि के गर्न ?’ भन्दै निर्घात रुपमा कुटेको देखिन्छ । तर, कुटाइ खाने ती सुरक्षा गार्डले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा नेपाली भनेर भिडियो भाइरल भएपछि दूतावासले आवश्यक छानविन सुरु गरेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए । ‘यहाँको सेक्युरिटी एसोसिएशनमा हामीले त्यो भिडियोबारे छानविनको माग गर्दै अपिल गरेका छौँ,’ उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘भिडियोको आधारमा कुटाइ खाने नेपाली नै हो भन्ने कुनै यकिन छैन । घटना कुन कम्पनीमा, कुन ठाउँमा भएको भन्ने एसोसिएशनले नै पत्ता लगाउनेछ । त्यसपछि कामदारमाथि भएको अन्यायको विषयमा कारवाही गर्न एसोसिएशनले नै प्रहरीमा उजुरी गर्नेछ ।’
Prevविराटनगरमा फेरि दुई साता लकडाउन
Nextडरलाग्दो भयो कोरोना: एकै दिन ४ जनाको निधन
मृ’त’क छोरीको शव गा’ड्’न गएका बुवाले जब माटोमै गा’डी’एको अर्को शिशु जिवितै भेटाए
मृतक महिलाकी छोरीलाई पनि कोरोना
नेपालकै शक्तिसाली मन्दिर देवीको मन्दिर नबनाउँदा ६० जनाको नि*धन (सबैले सेयर गरौ)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (2462)
विवाह गरेको ७ दिनमै विदेशिएका श्रीमानलाई दुवईमा मृत्युदण्डको फैसला, अझै पनि उनको आशमा १७ वर्ष देखि बसेकी छन् धनिषा (2302)
कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम दिने घोषणा ! (2111)
लकडाउनबारे निश्चित खबर बाहिरियो।भोलीदेखी देशभर लकडाउन हुने निश्चित,पुरा पढ्नुहोस (1545)